Articles Christian Life | Calvary Burmese Church
Category Archives: Articles Christian Life
Don’t have Burmese font?… Click here မေတ္တာစိတ်သည် လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့် ကင်းစေလော့။ ဆိုးညစ်သော အမှုကို စက်ဆုပ် ရွံရှာကြလော့။ ကောင်းမွန်သော အမှု၌ မှီဝဲဆည်းကပ်ကြလော့။ ညီအစ်ကိုချစ်ခြင်း အရာမှာ၊ ပကတိပေါက်ဘော်ကဲ့သို့ တယောက်ကို တယောက် စုံမက်ကြလော့။ ချီးမွမ်းခြင်းအရာမှာ၊ သူတပါးကို ကိုယ်ထက်ချီးမြှောက်ကြလော့။ (ရောမ ၁၂း၉-၁၀) … Continue reading →
ဘုရင်ခံ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Bradford သည် အောက်ပါ ကြေငြာချက်ကို ၁၆၂၃ ခုနှစ် တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အချိန်ကား ဥရောပတိုက်မှ အမေရိကန် နိုင်ငံသို့ အန္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒယာ ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြတ်ကျော်ရောက်ရှိပြီး တတိယမြောက်နှစ်တွင်ဖြစ်သည်။
November 29, 2013	· 1 Comment
ကလေးငယ်တစ်ယောက် သူဖခင် နှင့် စကားပြောသည်။ သားသမီးများ နှင့် ဖခင်များ၏ အရည်အချင်း များအကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။
မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က သူကြည့်ဖူးသော Happiness ဟု အမည်ရသည့် documentary ရုပ်ရှင် ကားတစ်ခု အကြောင်း ပြောပြဖူးသည်။
တစ်ခါတုံးက မုဆိုးတစ်ယောက်ဟာ တနေကုန် အမဲလိုက်ပေမယ့် သားကောင် တစ်ကောင်မှ မတွေ့ဘူး။ နေ၀င် ချိန်နီးလာပြီဆိုတော့ ဘာကောင်ဘဲတွေ့တွေ့ အမိအရ ပစ်မယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ခဲထားတယ်ဆိုဘဲ….
November 21, 2012	· Leaveacomment
သူငယ်ချင်းရေ…. နင် ငါ့ကို မှတ်မိနိုင်ပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုရင် ဒီစာကို ရေးလိုက်တယ်…
ကနေ့ အသင်းတော်တွေမှာ “ယုံကြည်သူ များရဲ့ ထာဝရ ကလေးဘ၀” လို့ ခေါ်ဆို နေရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံနေရ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အသင်းတော် တွေမှာ အသင်းသားတွေ အများအပြား ရှိနေတာ ကတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်
September 15, 2012	· Leaveacomment
မိတ်ဆွေ…သင့်လက်ထဲမှာ ဘာရှိသလဲ? မိတ်ဆွေ ရဲ့လက်ထဲမှာ မရှိတဲ့အရာ (ငွေကြေးချမ်းသာ၊ အာဏာ) ထက်၊ ရှိတဲ့အရာ (ဘာမဆို) ကိုဘုရားသခင် အသုံးပြုချင်တယ်။ မောရှေ လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့အရာက တောင်ဝှေးကလေး တစ်ချောင်းသာဖြစ်တယ်။
အို ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်ဟာ ကျွန်ုပ်နှင့် အတူ ရှိပါလျက်နဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ပြင်းပြတဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ခံစားနေရဒါလဲ.. ခရစ်တော် အတွက်သာ မဟုတ်ခဲ့ရင်….. ဘုရားသခင်ကတိတော်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ အဖို့ ရှေ့အနာဂတ်သည် ထွန်းလင်းတောက်ပါနေသည်။
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေကျွန်ုပ် တို့ အမိမြန်မာပြည်၏ ခရစ်ယာန် သာသနာသည် ယခုအခါ အနှစ်နှစ်ရာ နီးကပ်လာလေပြီ။ ခရစ်ယာန်ဘာ သာဝင် အသင်းသူ/သားတို့သည် လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ နှုက်ကပတ်တော်ကို သိသင့်သလောက် သိခဲ့ကြ လေပြီ။
သန်းခေါင်အချိန်၌ ပေါလုနှင့် သိလတို့သည် ပဌနာပြု၍ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းလျက် သီချင်းဆိုလေ၏။ ထောင်ထဲ မှာ နှောင်ဖွဲ့ခြင်း ကို ခံရသော သူတို့သည် နားထောင်ကြ၏။ ထိုခဏခြင်းတွင် မြေကြီး သည် ပြင်းစွာ လှုပ် သော ကြောင့်
June 28, 2012	· Leaveacomment
သင်တို့သည် ဤလောက၏ အလင်း ဖြစ်ကြ၏။ တောင်ထိပ်၌ တည်သောမြို့ကို မကွယ်နိုင်။ ဆီမီးထွန်း၍ တောင်းဇလား အောက်၌ဖုံးထားလေ့မရှိ။ အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည် အလင်းကိုရစေခြင်းငှါ ဆီမီးခုံပေါ်မှာ တင်ထားလေ့ရှိ၏။
June 27, 2012	· Leaveacomment
“သို့ရာတွင် အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ် တော်သည် အကျွန်ုပ်တို့ အဘဖြစ်တော်မူ၏၊၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် အိုးမြေဖြစ်ပါ၏၊၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ် အိုးထိန်းဖြစ်ပါ၏။ အကျွန်ုပ်တို့ ရှိသမျှသည် လက်တော်နှင့် ဖန်ဆင်းသောအရာ ဖြစ်ပါ၏။ ”
June 9, 2012	· Leaveacomment
၂ ကော ၁၀း၁၀ တွင် တမန်တော်ရှင်ပေါလုအကြောင်းကို မြန်မာသမ္မာကျမ်းစာ၌ အောက်ပါအတိုင်း ဋီကာ ဖွဲ့ရေးသားထားသည်။ “အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူ၏ စာသည် လေးလံသောစာ၊ တန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံသောစာဖြစ်၏။ ကိုယ်တိုင်ရှိလျှင်မူကား၊ သတ္တိမရှိသောသူ၊
Characteristics ofaCommitted person ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်နေသော အသင်းတော် လုပ်ငန်း၊ သာသနာလုပ်ငန်း (သို့) ဘုရားသခင်စေခိုင်းသော စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း (သို့) ပရဟိတလုပ်ငန်း တစ်ခုခု အောင်မြင်ဖို့ရန် အတွက် အဓိက လျှို့ဝှက်ချက် တစ်ခုကား အဘယ်နည်း။
အမည်မသိစာရေးသူ တစ်ယောက်က သည်လိုရေးသားဖူးသည်။ “ဘုရားသခင်ထံ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြွင်းမဲ့ ဆက်ကပ် အပ်နှံခြင်းသည် လူသားတို့ အနေနှင့် ဘုရားသခင်အတွက် လုပ်ပေးနိုင်သည့် အရာများတွင် အကောင်းဆုံးနှင့် တန်ဖိုး အရှိဆုံးသော အရာဖြစ်သည်”။
May 3, 2012	·2Comments
အစိမ်းရောင် Tattoo ရှင် မိန်းကလေး မကြာသေးခင်က ကြည့်လိုက်ရတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ The Girl with the Dragon Tattoo ပါပဲ။
April 26, 2012	· Leaveacomment
ရှင်းလင်းပြတ်သားတိကျတဲ့၊ အမှန်တရားအပြည့်ဖြစ်တဲ့ အဖြေကို ဖြေစေလိုသောမေးခွန်း (၂၀၀)
မေး။ ။ အသင်းတော်လား (သို့မဟုတ်) မှားယွင်းသောအယူဝါဒရှိသည့် အစွန်းရောက် အဖွဲ့အစည်းလား။ ဘယ်လိုခွဲခြားသိနိုင်မလဲ။
တပည့်တော်စစ်စစ် ဖြစ်ဖို့ အဟန့်အတားများ
ခရစ်တော်နောက်သို့လိုက်သည့် တပည့်တော်တိုင်း နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်စရာ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။
Pdf format စိတ်နှလုံးကို လုံးဝဥဿုံ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလျက် မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်ကာ အသူရာ ချောက်ကမ်း ပါးထဲသို့ ခြေစုံပစ်၍ ခုန်ချပစ်လိုက်သည်။ အား——နေရာကား ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၊ ပစ္စိဖိတ်ကမ်းခြေတနေရာ
ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမား တစ်ဦး။ ဗိုလ်လုပွဲတွင် ရှုံးသောအခါ မျက်ရည်တွေတွေကျပုံကို တီဗွီဖန်သားပြင်တွင် တွေ့ခဲ့ရ၏။ ရုပ်ရှင် မင်းသမီးတစ်ဦး။ ဇာတ်ကားအတွင်းမဟုတ်ဘဲ၊ အပြင်တွင်တကယ် မျက်ရည်ကျသည်ကို
December 6, 2011	· Leaveacomment
မောင်စောမင်းထက် ကိုယ်တိုင် မေးမြန်းခံရပြီး ကျွန်တော်ကို ထပ်မံမေးမြန်းတဲ့မေးခွန်းကို ကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက် ဖြေကြား ပေးပါမယ်။ တစ်ကယ်တော့ ဒီမေးခွန်းတွေဟာ
သမ္မာကျမ်းစာ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ် ကို သိရှိခြင်းသည် ယုံကြည်သူ တစ်ဦး၏ အသက်တာ တွင် အရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုဖြစ်သည်။
စာရေးသူ-မောင်ဇလပ်ဖြူ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့ယုံကြည်ရာဘာသာတရားကို လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်၍ ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိ သော လူ့အဖွဲ့စည်းတွင် ယနေ့ အသက်ရှင်နေထိုင်ရသူများဖြစ်သည်။
September 13, 2011	· Leaveacomment
ကျွန်တော် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀တုံးက မဂ္ဂဇင်းစာစောင်တစ်ခုမှာပါရှိတဲ့ ရုပ်ပြောင်ကာတွန်းတစ်ခုကို လွန်စွာ သဘောကျခဲ့ဘူးတယ်။
It is well with my soul (ဓမ္မသီချင်းတို့၏ရာဇ၀င်များ)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ မစ္စဂျွန်ဘရု(စ်)ဒေါ့(ဒ်) Mrs.John Bruce Dodd သည်မိခင်များကို မေလဒုတိယအပတ်တွင် မိခင်များနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဂုဏ်ပြုသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် ဖခင်များကိုလည်း
June 18, 2011	· Leaveacomment
PDF version for who does not have Burmese font ဤကမ္ဘာပေါ်၌ ဘာသာရေးမြောက်များစွာရှိသည်။ ဘာသာတိုင်း၌ အချက်ကြီးသုံးချက်ရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ (က) ယုံကြည်လက်ခံခြင်း (Doctrine) (ခ) ကိုးကွယ်ခြင်း (Rites) နှင့် (ဂ) ကျင့်ကြံခြင်း (Ethics) များဖြစ်ပါသည်။
ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း နှင့် အခြားသူများ လိုချင်သည့် ပုံစံအတိုင်း ဘ၀ခရီးလှမ်းခြင်း။ မနေ့က ကျွန်တော် တစ်ခု သတိပြုမိတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့
June 10, 2011	· Leaveacomment
ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်း (မဿဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင်း (၄)
သူများအပြစ်မည်ကဲ့သို့ဖြေလွှတ်နိုင်မည်နည်း မည်သည့်အတွက်ကြောင့် အပြစ်ပြုမိသည်ကို စုံစမ်းပြီး သိရန်ကြိုးစားပါ။
June 7, 2011	· Leaveacomment
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀ ရာစု၊ ဥရောပတိုက် ဆွစ်ဇာနိုင်ငံရဲ့ တောင်ပေါ်မြို့ကလေး တစ်ခုမှာ ဘုရားကျောင်း အိုလေးတစ်ခုရှိတယ်။ အိုမင်းရင့်ရော်မှုနဲ့၊ ခေါင်မိုး အုတ်ကြွတ်ပြားတွေ စီတဲ့သစ်သားပြားတွေ ဆွေးမြေ့လွန်းလို့
သူတစ်ပါးသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြစ်မှားသော အပြစ်များကို အကျွန်ုပ်တို့သည် လွှတ်သကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များ ကိုလွှတ်တော်မူပါ။
ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်း (မဿဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင်း (၂)
PDF Readers Click here မြေကြီးပေါ်၌လည်း အလိုတော်ပြည့်စုံပါစေသော ယုဒလူမျိုးများ၏ စာရေးနည်း ဟန်ဖြင့် ဖေါ်ပြပြီးသော အချက်အပေါ်ပြန်ဆိုခြင်းသာဖြစ်ပြီး “နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ပါစေသော” အကြောင်းအရာနှင့် မထူးမခြား အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်း ( မဿဲ ၆း၅-၁၅ ) အပိုင်း (၁)
PDF Readers click here ဆုတောင်းခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ သခင်ယေရှု ၀မ်းနည်းခြင်း အကြောင်း တစ်ရပ်မှာ ဘုရားသခင်က လူ့အလိုကို လိုက်စေ လိုခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ Ruth Dillow ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ပင်တဂွန်စစ်ဌါနချုပ် မှ သတင်းဆိုးတစ်ခုကို မမျှော်လင့်ဘဲကြားလိုက်ရတယ်။
နှုတ်ကပတ်တော် ဆိုသည့် မြန်မာ စကားလုံးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Word မှ ဘာသာပြန်ဆို ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ငါတို့သည် ထ၍ တည်ကြည်ကြ ကုန်အံ့ လို့ပြောတဲ့ အခါ နေဟမိ ဆိုတဲ့ဂျူးလူမျိုး တစ်ယောက်က ယုဒ လူတို့ကို စည်းရုံးဦးဆောင်ပြီး
ဓမ္မသီချင်းတို့၏ရာဇ၀င် (Amazing Grace)
သမ္မာကျမ်းစာသည်ကျွန်တော်တို့ ဘ၀အတွက် မည်သို့အရေးပါသနည်း
“သမ္မာကျမ်းစာမှရရှိသော အသိဥာဏ်ပညာသည် ကောလိပ်ကျောင်းမှ သင်ယူရရှိသော ပညာရေးထက် ပို၍တန်ဖိုးရှိသည်” (Theodore Roosevelt, အမေရိကန် သမတ ဟောင်း)
March 23, 2011	· 1 Comment
84,427 Since July 2011
Dr. Rick Warren (The Purpose Driven Life)
[googleapps domain="www" dir="calendar/hosted/calv…
ပျောက်သောသား - The Prodigal Son